Iindaba -Ujikajika njani imisonto yenqwelomoya kwinkqubo yoomatshini?
Ujikajika njani imisonto yenqwelomoya kwinkqubo yoomatshini?
Umsonto wenqwelomoya ukwabizwa ngokuba ngumsonto wokuphela, kwaye ukumila kwawo kwamazinyo kuyafana nomsonto oxande, kodwa umsonto osisicaba uqhele ukusetyenzwa kumsonto ogqityiweyo kwisilinda okanye kwidiski. Ukuhanjiswa kwesixhobo sokujika xa kuthelekiswa nomsebenzi wasemacaleni xa kusenziwa umsonto wenqwelomoya yiArchimedes spiral, eyahlukileyo kumsonto we-cylindrical oqhelekileyo. Oku kufuna inguquko enye yomsebenzi, kwaye inqwelwana esembindini ihambisa inowuthi kwindawo yokusebenza kamva. Apha ngezantsi siza kwazisa ngokukodwa indlela yokuguqula imisonto yenqwelomoya ngaphakathi umatshini inkqubo.
1. Iimpawu ezisisiseko zomsonto
Amalungu adibeneyo asetyenziswa ngokubanzi ngexesha lokuchwetheza, zombini kunye nemisonto yangaphandle. Kukho iindidi ezine eziphambili ngokokuma kweprofayili yomsonto: umsonto onxantathu, umsonto we-trapezoidal, umsonto onamanzi kunye nomsonto oxande. Ngokwenani lemisonto yomtya: intambo enye kunye nemisonto emininzi. Koomatshini abohlukeneyo, imisebenzi yamalungu afakwe imisonto ikakhulu kubandakanya oku kulandelayo: enye yeyokuqinisa kunye nokudibanisa; enye yeyokuhambisa amandla kunye nokutshintsha indlela yokuhamba. Imisonto engunxantathu ihlala isetyenziselwa ukudibanisa kunye nokuqina; Imisonto ye-trapezoidal kunye noxande zihlala zisetyenziselwa ukuhambisa amandla kunye nokutshintsha indlela yokuhamba. Izidingo zabo zobugcisa kunye neendlela zokulungisa zinendawo ethile ngenxa yokusebenzisa kwabo ngokwahlukeneyo.
2. Inkqubo yokulungisa umsonto
Ukongeza ekusebenziseni izixhobo zomatshini eziqhelekileyo, ukwenzela ukunciphisa ngempumelelo ubunzima bokulungisa imisonto, ukuphucula ukusebenza komsebenzi, kunye nokuqinisekisa umgangatho wokulungiswa kwemisonto, i-CNC machining ihlala isetyenziswa.
Imiyalelo emithathu ye-G32, i-G92 kunye ne-G76 isetyenziselwa izixhobo zomatshini ze-CNC.
Myalelo G32: Inokuqhubekeka ngentambo yokubetha enye, umsebenzi wenkqubo enye unzima, kwaye inkqubo inzima kakhulu;
Umyalelo we-G92: Umjikelo osikiweyo wokusika intambo unokufezekiswa, oluncedo ekwenzeni lula ukuhlelwa kwenkqubo, kodwa kufuna ukuba umsebenzi ungabinanto ukuze uhlaziye kwangaphambili.
Myalelo G76: Ukoyisa iziphene ze-Command G92, into yokusebenza inokwenziwa ngomatshini ukusuka kwinto engenanto ukuya kwintambo egqityiweyo ngexesha elinye. Ukugcina ixesha lenkqubo kuluncedo olukhulu ekwenzeni lula inkqubo.
I-G32 kunye ne-G92 ziindlela zokusika ngokuthe tye, kwaye imiphetho yokusika kulula ukuyinxiba. Oku kubangelwa ikakhulu kukusebenza ngaxeshanye kwamacala amabini ebala, amandla okusika amakhulu kunye nobunzima ekusikeni. Xa umsonto ngetela enkulu usikiwe, isiko lokusika linxiba ngokukhawuleza ngenxa yokusika okukhulu, okubangela impazamo kububanzi bomsonto; Nangona kunjalo, ukuchaneka kobume bezinyo obucutshungulweyo kuphezulu, ke kusetyenziswa ngokubanzi ukuqhubekeka kwentambo encinci. Kuba ukusikwa kokuhamba kwesixhobo kugqityiwe ngenkqubo, inkqubo yokuchaka inde, kodwa iyaguquguquka.
I-G76 yeyendlela yokusika i-oblique. Ngenxa yokuba yinkqubo yokusika enamacala amabini, ukusika okufanelekileyo kulula ukonakaliswa kwaye kunxitywe, ukuze umphezulu osikiweyo womatshini ungangqinelani. Ukongeza, xa i-engile yokusika itshintsha, ukuchaneka kobume bezinyo kubi. Nangona kunjalo, uncedo lwendlela yokwenza into kukuba ukusika ubunzulu kuyancipha, umthwalo wesixhobo sincinci, kwaye ukususwa kwe-chip kulula. Ke ngoko, indlela yokuqhubekeka ilungele ukuqhubekeka kwemisonto enkulu yenqaku.